Moobayl - LaComparación
Moobayl | 0 Comments
Samsung waxay ku dartay 2G-da la taaban karo ee shabakadeeda
Shabakadda Helitaanka Raadiyaha ee Samsung ee Virtualized (vRAN) waxay hadda taageertaa isku xirka 2G, iyada oo wax ka qabanaysa mid ka mid ah meelaha xanuunka ugu weyn ee shirkadda ee qalabka isgaarsiinta.
IOS 16 beta 2 waxay la timaadaa horumarin badan oo fariimaha iyo kaydinta ah
Apple waxay sii daysay casriyeynta beta ee iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura, iyo watchOS 9 usbuucan (June 22), halkaas oo ay jireen xoogaa hagaajin ah iyo hagaajinta astaamo cusub oo lagu dhawaaqay WWDC. Halka Maareeyaha Marxaladda iPadOS 16 uu leeyahay ...
Ericsson iyo Oppo waxay horumar ka sameeyeen qaybta shabakadaha 5G
Ericsson, Oppo iyo Qualcomm ayaa dhamaantood si guul leh u tijaabiyay kala qaybinta shabakadaha 5G ee talefanka casriga ah ee ganacsi ahaan loo heli karo, taas oo u gogol xaaraysa in la baahiyo tignoolajiyada.
Kiisaska ugu fiican ee iPhone kaaga ee dukaamada online
Maalgelinta mobilada heerka sare ah waxay u janjeertaa inay noqoto mid ka mid ah naf-huryada dhaqaale ee waaweyn ee aynu samayn karno dhanka tignoolajiyada. Aaladaha sida iPhone-ka ayaa leh qiimo ka badan €1.000, sidaas oo kale, marka lagu daro iibsashada terminalka, waa lama huraan.